မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 2
51 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 7:10 am
52 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 10:23 am
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ထူးထူးထွေထွေတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ဖိုရမ်လည်း မကြာခင်မှာ gtalk bot တင်တော့ မှာဆိုတော့ အရင်တုန်းကလို bot ကိုတူတူစောင့်ကြတာပေါ့။
53 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 10:34 am
Topic အသစ်ခွဲပြီး ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ ... [You must be registered and logged in to see this image.]
54 ကဲ မိတ်ဆက်ပြီဗျား on 10th October 2009, 11:40 am
အားလုံးပဲ ညီအစ်ကိုများ မင်္ဂလာပါ... လိုအပ်တာ တွေရှိ့ရင်တောင်းဆိုပါ..
သိရင်ပြောပြပေးမယ်မသိရင်တော့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်.. ပျော်ရွှင်ပါစေ
55 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 11:48 am
မင်္ဂလာပါ ပဲခူးသားလေး ခင်ဗျာ
MITR ဖိုရမ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်
သိတာလေးတွေ မျှဝေပေးနော်။ မသိရင်လည်း ရူးချင်ယောင်တော့ ဆောင်မနေပါနဲ့။ တကယ်ရူးသွားမှာစိုးလို့။ ရူးသွားရင် ကျနော်တို့ ဖိုရမ်အတွက် လူတော်တစ်ယောက် လျော့သွားမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
56 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 12:01 pm
ဖိုရမ် အပြင်အဆင်လေးတွေ.. အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်. .ကြိုးစားကြပါ...အားလုံးက ခင်မင်ပါတယ်.
ပဲခူးသား ကတော့ ပျော်တတ်တယ်...
57 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 12:07 pm
ကိုယ့်ဖိုရမ် ချီးကျူးရင်တော့ ဘယ် Admin က မပျော်ဘဲနေမလဲနော့်။ ကျနော်လည်း အဲဒီ့လိုမျိုးပါဘဲ။ အခုလိုမျိုး ဖိုရမ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာကိုတောင်မှ ချီးကျူးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖိုရမ်က အခုမှ အရှိန်ယူနေတဲ့ ကာလဖြစ်နေလို့ ကျနော်တို့အားလုံး အတူတူကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ။
အစ်ကို ရူးရင် ငိုမယ့်သူတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ ဖိုရမ်မှာလည်းရှိမှာပါ။
58 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 1:04 pm
59 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 9:45 pm
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
60 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th October 2009, 9:09 am
ကျနော်ကတော့ ထူးထုးထွေထွေမပြောတော့ဘူးနော်။ အကောင့် နှစ်ခုနဲ့တောင် ခေါ်ထားလို့လေ
61 Myanmar IT Resources Forum မှ member အားလုံးမင်္ဂလာပါ on 11th October 2009, 2:34 pm
Ye` Htet Aung
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-11
62 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th October 2009, 2:50 pm
MITR Forum မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။
63 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th October 2009, 7:36 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ၀ါဂွမ်းတွေနဲ့ နွေးထွေးအောင်ပါ
64 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th October 2009, 8:27 pm
မင်္ဂလာပါ ကိုရဲထက် .. ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
ပညာများ မျှဝေပေးပါဦးဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
65 Poe Tone Lone ပါ။ on 12th October 2009, 9:06 pm
66 မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် on 12th October 2009, 9:52 pm
အခုမှ တွေ့လို့၊ စပြီးဖိုရမ်တွေရဲ့ ထုံးစံလေးအတိုင်း သိရအောင် မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗျာ.
နာမည် ကတော့ Galaxy ပါ. နေတာက တော့ အာကာသထဲ မှာပါ.. [You must be registered and logged in to see this image.]
အလုပ်အကိုင်က Computer Network Administrator တစ်ယောက်ပါ..
ကျွှန်ပျူတာ နဲ့ပက်သက်ပြီး IT ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားရင် ၀င်လေ့လာတတ်လို့ ၀င်လာခဲ့ပြီ...
အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။. နည်းပညာများ ပူးပေါင်းပြီး လေ့လာ လိုပါတယ်.
67 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th October 2009, 11:06 pm
နည်းပညာကမ္ဘာ ထဲက ဆို တော့ ပိုပြီးလို့ ကြိုဆိုပါတယ် ဗျာ ... သိထား တာကလေးတွေ ကိုလည်း မျွှဝေပါ .. မသိသေး တာတွေ ကိုလည်း စားသုံးသွားပါ ဦး ဗျာ ... ဖိုရမ် မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ ...
68 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th October 2009, 11:10 pm
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ .. MITR ဖိုရမ် က နေပြီးတော့ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် ... ဖိုရမ် မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ... မသိ တာကလေးတွေ ကိုလည်း မေးမြန်း နိုင်သလို သိထား တာကလေးတွေ ကိုလည်း မျွှဝေ ပါဦး ပိုးရေ ...
မိတ်ဆက်ပိုစ့် က နှစ်ခု ကြီး ထပ်နေလို့ တစ်ခု ကို ဖျက်လိုက်တယ်နော် ... ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ
69 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 9:11 am
hardware & network သမားချင်းတွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
70 Introduction to MMITR on 13th October 2009, 9:32 am
စာရေးလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်လို့ပဲသုံးတတ်တယ်.... အပြင်မှာတော့ အဲ့လိုမပြောပါဘူး.... [You must be registered and logged in to see this image.]
ကွန်ပျူတာလောက ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်... လေ့လည်းလေ့လာနေပါတယ်....
အခုမှစတင်လေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတသ်ိပ်မရှိပါဘူး...
71 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 10:00 am
ကျနော်တို့ဖိုရမ်ကနေပြီး မသိသေးတဲ့ ပညာတွေကို ရအောင်ယူနိုင်ပါစေ....
72 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 10:06 am
ပိုးတုံးလုံးတွေ ၊ပိုးတွေလုပ်မနေနဲ့ ၀က်က၀က်ပဲ........
73 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 5:29 pm
MITR Forum မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
လိုချင်တာယူသွားပြီးတော့ ပါလာတာလေးတွေ ထားခဲ့ပေးပေါ့။
74 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 5:32 pm
မင်္ဂလာပါ မ သီရိ
ကျနော် အစ်မကို MMSO မှာကတည်းက လေးစားတာပါ။ Database အကြောင်းရှင်းသွားတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
အဲလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေလည်း ကျနော်တို့ဆီမှာပါ ရေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Programming ၇ရင်လည်း Programming အကြောင်းပါဆွေးနွေးပေးပေါ့။
75 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 5:41 pm
ပိုးတုံးလုံး က ဘယ်သူလဲဆိုတာရိပ်မိနေသလိုဘဲနော်။
အက်ဒမင်ကြီး [You must be registered and logged in to see this link.] ကျနော်မျိုး အလံဖြူပြရအောင် လုပ်ပြန်ပြီလားဟင် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ပိုးတုံးလုံး ဆိုတာ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် Welcome ပါခင်ဗျာ။
တားတို့ကို ကူညီမယ်ဆိုရင်လည်း အစွမ်းကုန်ကူညီပါနော်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
76 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 7:06 pm
ကြိုဆိုပါတယ် မသီရီရေ.....အစ်မရေးတဲ့ post တွေကိုလည်းလေ့လာဘူးပါတယ်ဗျာ.....ကျွန်တော်တို့ လည်း beginner ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်....အတူတူ share လုပ်ကြတာပေါ့....
77 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 7:13 pm
မင်္ဂလာပါ မသီရိ ..
Database အကြောင်းလေး မျှဝေပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ...
78 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 7:43 pm
Welcome from MITR [You must be registered and logged in to see this image.]
79 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th October 2009, 7:45 pm
hardware နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အကြောင်းအရာတွေ မျှော်လင့်နေပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
80 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th October 2009, 2:42 pm
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါ ပီပေါ်
မိတ်လိုက်ကတည်းက ( အဲဟုတ်ဘူး ) မိတ်ဆက်ကတည်းက အတော်ပျော်တတ်တဲ့သူမှန်း
ရိပ်မိတယ်.( နှာခေါင်းမွှေး )
81 မိတ်ဆက်ပါရစေ.. on 14th October 2009, 3:28 pm
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာအိုင်တီရဲ့ လေ့လာသူတစ်ယောက်အဖြစ် ဝင်ရောက်လာတဲ့ DMan ပါ..
အားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်..
ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ နိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်..
ခင်မင်စွာဖြင့် .. လေ့လာသူသစ် DMan
82 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th October 2009, 5:25 pm
ကြိုဆိုရင်းနဲ့ အစ်ကို့ဆိုက်လေးကို အလည်ရောက်သွားခဲ့တယ် ၊ အစ်ကို့ရဲ့ဆိုက်ကလေးက ကောင်းပါတယ်
ဗျာ ၊ ဒါပေမဲ့ နှင်းလေးတွေကျနေအောင်လုပ်ထားတဲ့ script ကြောင့်လို့ထင်တယ် ၊ တော်တော်လေး လေးနေတယ်ဗျာ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော်က ခင်လို့ ဝေဖန်တာပါ [You must be registered and logged in to see this image.] ။
83 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th October 2009, 9:55 pm
kyawmin wrote: ကြိုဆိုရင်းနဲ့ အစ်ကို့ဆိုက်လေးကို အလည်ရောက်သွားခဲ့တယ် ၊ အစ်ကို့ရဲ့ဆိုက်ကလေးက ကောင်းပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. အဲလောက်လေးချင်တဲ့ နှင်းဆိုပြီး ဖြုတ်လိုက်ပြီဗျာ.. နောက်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ.. [You must be registered and logged in to see this image.]
84 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th October 2009, 10:42 pm
မင်္ဂလာပါဗျာ .. ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
အကို့ ဆိုဒ်က တော်တော်စုံတာပဲဗျ .. ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
85 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 1:51 am
rs wrote: နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါ ပီပေါ်
နာမည် က ပီပေါ်လား .. မသိ ပါဘူး ကျွန်တော် ဖတ်နေတာက ပေါ်ပီ ဆိုပြီးတော့ ဖတ်နေတာ ( ဘာများလဲ လို့ တောင် စဉ်းစားလိုက်သေးတယ် )
မင်္ဂလာပါ ဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်ကနေပြီးတော့ ကြိုဆိုပါတယ် ... ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှုင်ပါစေဗျာ ...
86 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် on 15th October 2009, 12:47 pm
တညျနရော : မြန်မာပြည်တစ်နေရာ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-14
[You must be registered and logged in to see this image.] မိနွေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အက်ဒမင်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိနွေးလေ့လာစရာတွေ မကုန်နိုင်အောင် ဒီဆိုဒ်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အထူးကိုအဖိုးတန်တဲ့ အကျိုးပြုဆိုဒ်တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
don't use limited colour
87 hi everybody , i have to wirte long topic must over 10 that why :P on 15th October 2009, 2:38 pm
my name is kingandhero [You must be registered and logged in to see this image.]
my stupid older bro named is nay zaw,
now i am 13 years old and i still like playing game [You must be registered and logged in to see this image.]
i hate vb.net so much [You must be registered and logged in to see this image.]
i like to say bla bla bla alot ,
88 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 2:42 pm
မိနွေး wrote: [You must be registered and logged in to see this image.] မိနွေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အက်ဒမင်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိနွေးလေ့လာစရာတွေ မကုန်နိုင်အောင် ဒီဆိုဒ်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အထူးကိုအဖိုးတန်တဲ့ အကျိုးပြုဆိုဒ်တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဟုတ်ကဲ့.. ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း အသင်းဝင်အသစ်ပါ.. အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
don't quote the limited colour post
89 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 2:43 pm
kingandhero wrote: my name is kingandhero [You must be registered and logged in to see this image.]
ဟိုတ်ကောင် ငါမကြို ဆိုဘူး နော် ။ မင်း ကို ။ ရုပ်ရုပ်ရုပ် လုပ် ငါ အရင်ဆုံး ဘန်းမယ [You must be registered and logged in to see this image.]်။
ညီ အကို အချင်းချင်း မလို သိနေတယ် နော် ။ မင်း အကြောင်း ။။ ကိုယ့် ဟာကို ဂိမ်သွားဆော့ ။
90 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 4:24 pm
အားလုံးကို ကျွန်နော်တို့ Myanmaritresource များအားလုံးက နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။
သိတဲ့ပညာမျှဝေပြီးတော့ ၊ရှိတဲ့ပညာလည်း သုံးဆောင်သွားပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
91 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 6:08 pm
MITR ဖိုရမ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
မသိတာတွေ မေးပြီး ၊ သိတာတွေ ထားခဲ့ပေးပါ ဆိုတာကတော့ အပေါ်က အစ်ကိုပြောလို့ ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်
အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျနော့်ဆီ PM ပို့နိုင်ပါတယ်။
92 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 6:24 pm
ကြိုဆိုပါတယ် .. မမိနွေး ခင်ဗျ ..
ပညာရပ်များ ဖလှယ်ကြပါစို့  [You must be registered and logged in to see this image.]
93 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 6:55 pm
ကိုနေဇော် မကြိုဆိုပေမယ့် ကျနော်ကြိုတယ်ဗျို့  [You must be registered and logged in to see this image.]
၀မ်းသာပါတယ် .. ခုလို ပညာတွေမျှဝေပေးမယ့်လူများ ၀င်လာတဲ့အတွက် ..
ကျနော်တို့လို လေ့လာရေးသမားများ ကို ခင်မင်နိုင်ပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
94 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 7:03 pm
၁၃ နှစ် နဲ့ ဥာဏ်လည်းတအားကောင်းပြီး တအားတော်လို့ ချီးကျူးပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူစရာပါ။
အစ်ကိုတောင် ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီ အခုထိ ၊ ညီ မကြိုက်တဲ့ VB.NET တစ်ခုဘဲသိသေးတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွာ.. မြန်မာလူမျိုးတွေကို အကျိုးပြုချင်တဲ့စိတ် တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ကို အစ်ကိုတို့က ညီကို ကြိုဆိုနေပါတယ်ကွာ.
ညီသိထားတာတွေကိုလည်း မျှဝေချင်စိတ်ရှိရင် ပြန်လည်မျှဝေပေးပေါ့ကွာ... အစ်ကိုတို့လည်း မသိတာတွေ ညီ့ဆီကနေ ပညာယူလို့ရတာပေါ့
95 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 8:18 pm
wow 13, nice... young & know programming language more than me @ ko nay@zaw, you have pretty good bro..
96 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 8:25 pm
ဟိုက်.....ပညာရှင်တွေကတော့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပါလား ၊ အသက်ကြီးတာငယ်တာ အဓိက
မကျဘူး ၊ သင်ပေးမယ်ဆိုလို့ကတော့ တပည့်ခံပြီးသားပဲ [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ညီလေးက hackforums က ၁၃ နှစ်သားလေး mod ဆိုတာများလား ။
97 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 8:39 pm
ဟိုက်ရှားဘား ........ငါတို့site က လူငယ်ပညာရှိတွေနေတဲ့ site ပုံစံဖြစ်နေပါလား......... ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ......ကျွန်တော်ကတော့....အသက်သာကြီးတယ်ဘာမှမသိသေးဘူး........
98 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th October 2009, 8:43 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ဗျာ ... တော်တော် ကို အားကျမိပါတယ် .. အခု လို အသက် အရွယ် နဲ့ ဒီလောက်လေ့ လာပြီးတာကို .. အကို တို့ တုန်းက အဲဒီ့ အသက် အရွယ် ကိုးယို ကားယား လုပ် ကောင်းတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်
99 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th October 2009, 10:54 am
ဟိုးတစ်ခါ MZ မှာတစ်ခါပြောတာမြင်ဖူးတယ်။ အဲဒီ့ကလေးလေးက ညီလား။ programming အကြောင်းကိုသင်ခိုင်းနေတဲ့ အကြောင်းကိုပြောနေတာ။ နောက် ကွတ်ကီး ခိုးစားတယ်လို့ ကိုနေဇော်ပြောတဲ့ ကောင်လေးကလည်း ညီပဲထင်တယ်။
100 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th October 2009, 5:52 pm
102 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]